एक दिगो तरीकाले कार्डबोर्डबाट बने फर्नीचरको डिजाइन क्रिएटिव अनलाइन
गत्ताबाट बनेको फर्नीचर डिजाइन
डिजाईन गत्ताबाट बने फर्नीचर एक सिर्जना गर्ने उद्देश्यको साथ अधिक नैतिक प्रस्ताव एक वातावरण प्राप्त गर्दा वातावरण संग आधुनिक डिजाइन यसले यसको निर्माणको अवधिमा प्रदूषण प्रक्रियाविना वैकल्पिक फर्नीचर देखाउँदछ। यस अवस्थामा हामी सानाको लागि राखिएको केही फर्नीचर, बच्चाहरूको लागि कार्डबोर्ड फर्नीचर देख्नेछौं जुन फर्नीचरको विचारलाई त्यस्तो चीजमा बदल्नको लागि प्रबन्ध गर्दछ। भेला र पृथक छिटो
भविष्यको लागि विचारको साथ एक कम्पनी यसको पछाडि छ फर्नीचर सिर्जना गर्ने अभिनव तरिका त्यो मार्फत एक रोचक प्रस्तावको साथ आउँदछ नयाँ डिजिटल निर्माण प्रणाली अगाडि सबै तरिका मा सोच्दै। कुनै श doubt्का बिना यो एक धेरै छ आकर्षक, नेत्र-आकर्षण र महान सिर्जनाकर्ताहरू द्वारा।
हरियो लोरी अभिनव निर्मित फर्नीचर सिर्जना गर्दछ केवल कार्डबोर्डको साथ। तिनीहरू सधैं न्यानो र आधुनिक समाधानहरू प्रदान गर्छन् वातावरण प्रति सम्मानजनक यसलाई डिजिटल निर्माणको नयाँ विचारहरू पूरा गर्दै। यसको उत्पादनहरू सधैं दिगो तरीकाले बच्चाहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरू फर्निचर हुन् स्मार्ट, हल्का, जम्मा गर्न र प्रयोग गर्न सजिलोदुबै आमा बुबा र बच्चाहरूको लागि धेरै घण्टा रमाईलो प्रदान गर्दै।
जब हामी इको उत्पादनको बारेमा कुरा गर्छौं, यस अवस्थामा ए इको टिकाऊ फर्नीचर हामीले यसलाई धेरै व्यापक दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्दछ, एकल समस्यामा केन्द्रित हुनबाट जोगिदै जब यो वातावरणको सम्मान गर्ने उत्पादन पाउने कुरामा आउँछ। यदि हामी एक टिकाऊ उत्पादनको डिजाइन गर्न चाहन्छौं भने सम्पूर्ण डिजाइन योजना सबैको सोच जीवन चरण त्यस उत्पादनको: कच्चा माल, यातायात, निर्माण, सामग्री, रिसाइक्लि ... ... आदि प्राप्त गर्दै। त्यहाँ विवरणहरूको एक सम्पूर्ण वर्गीकरण छ जुन हामीले दिमागमा लिनुपर्दछ किनभने डिजाइनरको काम केवल डिजाइनमा मात्र केन्द्रित छैन। केहि कुशल छ कि सिर्जना गर्नुहोस् सबै तरिकामा, एक उत्पाद जुन उत्तम संभव तरिकामा काम गर्दछ।
यदि तपाईं एक उत्पादन डिजाइन तपाईं हुन पर्छ केहि स्पष्ट चीजहरू:
कसरी म उत्पाद लाई दिगो तरीकाले डिजाइन गर्न सक्छु?
म कुन सामग्री प्रयोग गर्न सक्छु? यी सामग्रीहरू कहाँबाट आउँदछन्? के सामग्रीले मेरो आवश्यकता पूरा गर्दछ?
यो एक पालना देखि cradle वा एक हो चिहानमा पालना? (डबल लाइफ वा बन्द साइकल डिजाइन)
म कसरी उत्पादन बनाउन सक्छु? डिजिटल निर्माण? रसद?
यी केहि सामान्य चीजहरू हुन् जुन हामीले दिमागमा राख्नुपर्दछ जब यो आउँछ एक उत्पाद डिजाइनजे भए पनि, जब हामी उत्पादन बनाउँछौं हामीले अगाडि जानुपर्नेछ र यी अवधारणाहरूको बारेमा आफूलाई विस्तृत रूपमा सूचित गर्नुपर्नेछ। यसको निष्कर्ष यो हो कि यदि हामीसँग डिजाईन छ एक उत्पादन जुन सम्भव छैन वास्तविक संसारमा यो मानिन्छ कि हामीसँग धुवाँ छ।
1 इको क्रडल: कार्डबोर्ड पालना
2 इको तालिका: पारिस्थितिक तालिका
इको पालना: कार्डबोर्ड क्रिब
यो पालना हो कार्डबोर्डबाट बनेको र पहिलो महिनामा बच्चाको हेरचाह गर्न डिजाइन गरिएको। पालना इको क्र्याडल, यो आमाबाबुको ओछ्यानमा राख्न सकिन्छ, सही उचाईमा तिनीहरूलाई रक गर्नको लागि। छ हल्का वजन, तह, सेकेन्डमा भेला र पृथक कुनै उपकरण आवश्यक छैन, यात्रा को लागी उत्तम। यो रिसाइक्लेबल र एन्टी-ज्वलनशील हो।
यो घरानाको डिजाइनको साथ हामी देख्न सक्छौं पूर्व योजना तिनीहरू पुग्नको लागि विकास गर्नुपर्‍यो प्रभावकारी, सरल र उपयोगी निष्कर्ष। हामी आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्न सक्छौं: मेरो उत्पादनलाई कुन प्रतिरोधको आवश्यकता छ? यो धेरै वजन बोक्छ? के सामग्रीहरू सुरक्षित छन्? कसरी उत्पादन प्रयोग हुनेछ? क्रिब एक बच्चाको लागि डिजाइन गरिएको छ बम प्रूफ संरचना आवश्यक छैन (केही चीज जुन उत्पादनहरूको विशाल बहुमतमा गरिन्छ), क्रिबलाई भेला गर्न र बिच्छेदन गर्न सकिन्छ ताकि यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न सकिन्छ।
इको तालिका: पारिस्थितिक तालिका
una कार्डबोर्डबाट बनेको तालिका बच्चाहरूको लागि डिजाइन तर १२० किलोग्राम वजन समर्थन गर्न सक्षम। यसको हल्का तौल र यसको सजिलो असेंब्ली र ह्यान्डलिंगले यसलाई बनाउँदछ एक आदर्श तालिका सानाको लागि। कार्डबोर्ड प्रदान गर्दछaबच्चाको लागि सुरक्षित वातावरण किनकि यस सामग्रीमा वारमा कम कडा हुनुको फाइदा छ। सफाई समस्या छैन किनकि यसको सतह सफा गर्न सकिन्छ समस्या छैन।
गत्ता एक यस्तो सामग्री हो जुन सँधै हामीसँग हुन्छ तर हामी यसलाई पहिले एक शक्तिशालीको रूपमा हेरेनौं दिगो भवन तत्व। सँगै डिजाइन प्रविधि र नवीनता तिनीहरूले डिजिटल निर्माणका लागि ढोका खोलिदिएका छन् र यसले हामीलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधाहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » गत्ताबाट बनेको फर्नीचर डिजाइन